Cibaado: Malmö oo la tusaalaysto ayaa la arki doonaa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Layla: Annaga ayaa wax qabsan karna hablaheenna. sawir: Kenadid Mohamed/SR
Cibaado: Malmö oo la tusaalaysto ayaa la arki doonaa
La daabacay onsdag 31 juli kl 17.14
Magaalada Malmö ayaa dhowaantan si habsami leh loogu soo gabagabeeyey mashruuc loogu magac darey ”tjejer kan”, oo macnihiisu yahay ”habluhu way awoodaan kadib saddex sannadood oo uu socday.
Mashruucan oo muddadii uu socday ey qayb ka ahaayeen sannad walba hablo hablo badan ayaa asalkiisii ku biloowday su’aal ka dhalatay cilmi baaris lagu sameeyay jaamicadda Malmö ee gobolka Skåne. Waxaana su’aashaa meesha ka qaaday sidii wax looga bedeli lahaa ururka Hidde iyo Dhaqan oo muddo 24 sannadood ah ka howlgalayay magaalada Malmö, sida ay sheegtay Cibaado Aadan Cilmi oo muddadaa saddexda sannadood ahayd hor joogihii mashruuca.
Layla Axmed waa 17-jir weli ku jirta waxbarashadii iskuulka, isla markaana waxay ka mid ahayd hablihii da’da yaraa ee sida firfircoon uga qayb qaatay mashruucaasi. Layla Axmed ayaa sheegtay in ka maqnaanshaha saaxada ururrada ee habluhu aanay ugu wacnayn karti la’aan ee aaney helin booskoodii, eeddana ey mararka qaarkood qayb ku leeyihiin hablaha qudhooda iyo guryaha ey ku soo barbaareen.
Zowda, waa labaatan jir dhigatad fasalka saddexaad ee dugsiga sare. Sannadkii 2018 oo ey u soo wareegtay magaalada Malmö ayey sannadkiisii ugu dambeeyay qayb ka ahayd mashruucii tjejer kan. Waxayna hormuud u noqotay sidii ey ku abaabuli lahayd koox hablo ah oo xirfadda make up-ka la dhigata, midkaasina oo ay xiise hore u haysay.